Iindaba -I-IMMUNOBIO SARS-CoV-2 yokungathathi cala kwi-antibody Rapid Test iyafumaneka ngoku
I-Immunobio iphumelele ngokuphumelelayo i-COVID 19 yoThintelo loVavanyo olukhawulezileyo lomzimba, kunye nekhithi yovavanyo esele ine-CE kunye neTshayina。
1. IMMUNOBIO SARS-CoV-2 engathathi hlangothi kuvavanyo olukhawulezileyo lwe-Antibody (i-COVID-19 Ab) yenzelwe ukusetyenziswa ngobuchule kuphela.
2. Nawuphi na umhambisi kufuneka afumane ukuvunywa okufanelekileyo okanye imvume kumagunya asekuhlaleni ngaphambi kokungenisa olu vavanyo lukhawulezileyo.
3. I-IMMUNOBIO SARS-CoV-2 engathathi cala kuvavanyo olukhawulezileyo lwe-Antibody (COVID-19 Ab) yayilwa ngendlela yokhuphiswano. Indlela yokutolikwa kwesiphumo yahlukile kuvavanyo lwe-COVID-19 IgG / IgM okanye i-COVID-19
4. Uvavanyo lwe-Antigen. Umqhubi kufuneka afunde imiyalelo yokusetyenziswa ngocoselelo ngaphambi kokuba enze uvavanyo.
5. Inkampani yethu iyibhalisile le mveliso kunye ne-CE egunyazisiweyo yiCIBG. Sikwadwelise le mveliso kuLuhlu oluMhlophe loMphathiswa Wezorhwebo wase China.
6. Kukho ixesha leentsuku ezi-5 zokufaka isicelo seSatifikethi sokuvunywa kwamaNqaku aKhethekileyo akhutshwe licandelo lezempilo kunye nokuvalelwa kwabantu. Abathengi bethu abafuna ukungenisa le mveliso kufuneka baqinisekise iodolo kwangoko kunokwenzeka ukunciphisa usuku lokuhanjiswa.
Uvavanyo lwe-IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Rapid Test (i-COVID-19 Ab) luvavanyo olukhawulezileyo lokuchongwa komgangatho wee-antibodies ezithomalalisayo kwi-SARS-CoV-2 okanye izitofu zayo kwigazi elipheleleyo, kwi-serum, okanye kwi-plasma.
Ingcaciso yephakheji: 20 T / kit, 1 T / kit.
Yintoni i-Antibody ye-SARS-CoV-2 engathathi cala?
Amachiza athomalalisa ubundlobongela kwi-SARS-CoV-2 zizinto ezinokuthintela ukungena kweseli kwintsholongwane ye-SARS-CoV-2. Kwiimeko ezininzi, ii-antibodies ezithomalalisayo zithintela indibaniselwano ye-RBD ye-S protein ukusuka kwintsholongwane ukuya kwi-ACE2 receptors kwiseli. Kwimeko yokufumana kwakhona emva kosulelo, okanye ukugonywa ngempumelelo, ii-antibodies ezithomalalisayo ziyaveliswa kwaye zibe namandla okukhusela kwelinye ixesha losulelo lwe-SARS-CoV-2 virus.
Yintoni injongo yokufumana ii-antibodies ezithomalalisayo?
I-IMMUNOBIO SARS-CoV-2 engathathi hlangothi kuvavanyo olukhawulezileyo lwe-Antibody (i-COVID-19 Ab) isetyenziselwa ukuvavanya imeko yokungakhuselwa kwee-antibodies ezisegazini. Isetyenziselwa ukubeka esweni amandla okhuselo omntu omnye kwintsholongwane ye-SARS-CoV-2.
Ukulwa ubhubhane we-COVID-19, sinika ezi mveliso zilandelayo zovavanyo ngokukhawuleza.
ICoronavirus COVID-19 IgG / IgM yovavanyo olukhawulezileyo lwe-Antibody
Uvavanyo lwe-SARS-CoV-2 Antigen Rapid (COVID-19 Ag)
Iphepha le-SARS-CoV-2 Antigen Sheet
I-SARS-CoV-2 engathathi cala kwiKhithi yokuVavanya iiNtsholongwane
Iphepha le-COVID-19 IgG / IgM elingasuswanga